महानायक बच्चनलाई के भएको हो ? उनीसँग ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले गरे यस्तो खुलासा । – ताजा समाचार
महानायक बच्चनलाई के भएको हो ? उनीसँग ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले गरे यस्तो खुलासा ।
काठमाडौं । बलिउडमा महानायक भनेर चर्चा पाएर अमिताभ बच्चन गएको ३ दिनदेखि अस्पतालमैं हुनुहुन्छ । उहाँको कलेजोमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको परिवारले जानकारी दिएको छ । अमिताभ आफैंले धेरैपटक भनेको कुरा के हो भने उहाँको कलेजोले १०० मा २५ प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको छ । तर ३ दिनको अस्पताल भर्नासँगै अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा केही सुधार आएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार स्वास्थ्यमा अलि बढी नै समस्या देखिन थालेसँगै उहाँलाई मंगलबार २ बजेतिर अस्पताल लगिएको थियो । अहिले पनि बच्चनको अस्पतालमै उपचार भैरहेको छ । सन् १९८२ मा चलचित्र ‘कुली’को छायांकनको क्रममा चोट लागेदेखि उहाँमा समस्या हुन थालेको बताइएको छ । खबरका अनुसार छायांकनको क्रममा चोट लाग्दा उहाँलाई गल्तिले हेपाटाइटिस बी को बिरामीको रगत चढाइएको थियो ।
अहिले उहाँको कलेजोले ७५ प्रतिशत काम गर्न छोडिसकेको छ । जसको कारण अवस्था जुनसुकै समयमा पनि चिन्ताजनक हुने बताइएको छ । अस्पतालमा अमिताभको एक विशेष कोठामा राखेर उपचार भैरहेको छ । उहाँलाई जुहुस्थित नानावती अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ । यो भन्दा पहिले पनि यस खालको समस्या हुँदै आएको छ । एजेन्सी